Madaxweynaha Jubbaland oo shacabka ka dalbaday is cafis – Radio Daljir
Agoosto 23, 2019 3:15 g 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hadal uu ka jeediyay masjid ku yaal magaalada Kismaayo waxa uu ugu baaqay shacabka Jubbaland inay is cafiyaan oo ay midoobaan.
Axmed Madoobe oo markale ay xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Jubbaland u doorteen madaxweyne maanta salaada Jimcaha boqolaal dadweyne ah kula tukaday Masaajidka suuq weyne ee magaalada Kismaayo.
Masaajidkan ayaa la dhisay Sanadkii 1942 iyadoo dib u dhis iskaa wax u qabso ah ay ku dhiseen dadweynaha reer Kismaayo 2017kii.
“Waxaan ka codsanayaa shacabka Jubbaland in ay is cafiyaan oo midnimada bulshada iyo wadajirkeeda ay tahay shay qaali ah oo loo baahan yahay in la xoojiyo.”ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Jubbaland oo ay dowlada federalka diiday dib u doorashadiisa ayaa ku amaanay culimada magaalada Kismaayo sida ay dadweynaha ugu dhiiri galinayaan kor u qaadista barashada diinta Islaamka iyo in ay gacmaha is qabsadaan Bulshadu.